HAAROMSA- Lafaaf Lafee (Asoosamoota gaggabaaboo)-Waa’ee Haaromsa Biyya Xoophiyaa qoosaafi xabaan fakkeessee seenessa. Dubbisaa waliif daddabarsaa.. – Beekan Guluma Erena
HAAROMSA- Lafaaf Lafee (Asoosamoota gaggabaaboo)-Waa’ee Haaromsa Biyya Xoophiyaa qoosaafi xabaan fakkeessee seenessa. Dubbisaa waliif daddabarsaa..	Beekan Erena
Asoosama January 20, 2017January 21, 2017OROMO STRUGLE
148SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
HAAROMSA- Lafaaf Lafee (Asoosamoota gaggabaaboo)
#Haaromsa Kutaa 1ffaa!
♥Haaromsa Yaadota “Ilaalcha biroo” Fi Haaromsa “Yaadota Ilaalcha Shiroo!!
♥Haaromsa mataa haaddachuufi Haaromsa maqaa baafachuu!
‘Wal dha’ii moo wal ga’ii’ haaromsa hin haaromnee isa waliin dhooftotaan durfamaa jiru irratti ture kan ‘Haagos’
“Ilaalcha biroo qabu! Akkamitti dabbasaa haaddatu!? Akkamitti maqaa baafatu!? Jedhe. Hagos..!
Matadureen wal dha’ii haaromsa har’aa……
“Rifeensas nutu haada. Maqaas nutu baasa” jedhuun wal dha’iin haaromsa hin haaromnee banamte!
Cufaan wal dha’ichaas Eebbuma Haagos Kanaan ta’a jedhamee hirmaatoota wal dha’ichaatiin eeggama!
‘Wal dha’iin haroomsa waliin dhooftotaas yaadota heedduu waliin baa’isuun, yaadota kaan ammoo wal dhoofsisuun….! Yaadota gareelee yaadota adda addaa haroomsa hin haaromne haromsa gad fagoo Haaromsa Haagos fa’a akeekanitti, Yaadota haaromfamuu qaban jedhaman kaadhimuun wal dha’iin waliin dhooftotaa yaadota wal dhoofsisuun itti fufe…..!
Akkataadhuma ulaagaalee kaadhimummaa isaaniitti…! ‘Yaadota kaan Yaadota “Ilaalcha birootti” (Yaadonni kunneen yaadota ‘Haaromaa Qalbii Madooti).’
‘Yaadota kaan ammoo Yaadota “Ilaalcha shirootti” (Yaadonni kunneen yaadota misoomaawoo qabeenyummaan isaanii murtaawe yaadota ergamtoota Haagos yaadota Opdo isaan ‘Haaromaa Takka Badooti).’
‘Wal dha’ii moo wal ga’iin haaromsa hin haaromnee..
Inni yaadota haaromsa gad fagoof kaadhime gamaaf gamana ija keessa wal ilaalchisuu sun jalqabee jira…!
Ijji ‘Haaromaa Qalbii Madoo fi ijji ‘Haaromaa Takka Badoo’ wal irraa bu’uu didde!
‘… ijji ija sodaatte. Ija Haagos ija ija lachuu eegdu jidduun dhokataa ijji ‘Haaromaa Qalbii Madoo fi ijji ‘Haaromaa Takka Badoos’ wal ilaalutti luuccefatte…!
Ijji ‘Haagosis hojiilee ijoota lamaan (Ija Haaromaa Qalbii Madoo fi Ija Haaromaa Takka Badoo) jidduu jirtu akkuma baratte hojiilee ija ija keessa too’achuutiin boqonnaa libsuu ijaas hin arganne…gurris akkanuma…..!
Tanumaaf tana jidduutti
“Rifeensi kan nama dhuunfaati moo kan mootummaatii!? Ummanni rifeensa haaddachuufi maqaa baafachuuf eeyyama karaa mootummaa argachuu qaba kan jedhu seera biyyatti irratti barraa’ee jiraa!?”Jedhe ‘Haaromaan Qalbii Madoo tokko!’
Haagosis ..Aariidhaan dubbii afaanii butun..”Haaromsa gad fagoo amma taasisaa jirru keessatti, mataa haaddachuus ta’ee, maqaa baafachuun yakka! Sanuu yakka yakka biyya shororkeessuutiin wal qixatti ilaalluudha! Kanaaf seeronnii kunneen gad fageenyaan, sanuu sirritti gad fageenyaan haaromuu qabu! Barreeffamaan seera biyyatti irra jiraataniis jiraachuu baataniis seeronni kunneen gad fageenyaan haaromuu qabu jennee hanga nuti amannee jirrutti ni haaromu! Barreeffamaanis yeroo dhi’ootti seera biyyatti irra kaa’uu dandeenya!” Jedhe Haagos ‘Haroomaa Qalbii Madootti’ ija isaa naannesuun….! Ammas..Jiddutti ‘Haroomaan Qalbii Madoo’ inni biroo dubbii butachuun “seeronni biroo heedduun haaromuu qaban hin hafne jettuu isin!?” jedhee gaafii gaafii irraan ‘Haagositti’ dabale!
♥Haaromsa Yaadota “Ilaalcha biroo” Fi Haaromsa “Yaadota Ilaalcha Shiroo!
♥Haaromsa mataa haaddachuufi Haaromsa
Kutaa 1ffaa irraa kan itti fufe..!
‘Haroomaan Qalbii Madoo’ inni biroo dubbii butachuun “seeronni biroo heedduun haaromuu qaban hin hafne jettuu isin!?” jedhee gaafii gaafii irraan ‘Haagositti’ dabale!
‘Achumaan….! “Seeronni haaromsa hin haaromne…seeronni haaromsa gad fagoof kaadhimaman hundi isaanii irraa jalaan akkuma barbaachisummaa isiniitti gad ba’u! Ammaaf isaan kanneen irratti haaromsa gad fageenyaa hojjachuudha!” Jedhe Hagos ‘Haroomaa Qalbii Madoo’ gaafii gaafatetti ija babaasaa…!
“Isin maaliif calliftan!? Hin dubbatanii!? Jechuun Hagos gara ‘Haaromoo Takka Badootti’ harka isaa akeekuun hiree dubbachuu isaaniif kennee jira jechuu bifa fakkaatuun…!
‘Haaromoon Takka Badoos’ wal ‘dha’iin moo wal ga’iin’ haaromsaa yeroo dhumutti harka deeggarsaa kennuuf sa’aatii eegaa jirra jechuun hundi isaanii…Harka harka deeggarsaa qofaaf kireeffame sana baasan!
“Harki keessan sagalee deeggarsaa yaadota ilaalcha shiroo..! Yaadota misoomawoo itti gaafatamni isaanii murtaawe qofaaf sa’aatii dhumaa ‘wal ga’ii moo wal dha’ii’ eegguun ol qabuu barsiiftan kunis haaromsa gad fagoo barbaduun isaa waan hin hafneedha. Kanaafuu yaadota ‘haaromsa hin haaromne, haaromsa gad fagoof kaadhimamuuf jiran keessaatti nuuf qabamuu qabu” jedhe ‘Haroomaan Qalbii Madoo’ cinaa Hagositti dhi’aachuun taa’ee jiru tokko!
‘Hagosis haaromsis’… itti fufe!
Haaromsa hin haaromneen
Haagos Wal dha’ii haaromsa hin haaromnee isa marsaa kanaa cufe…..!
“Kaayyoon keenya isiniin qabannee biyya kana guddisuu, ummanni jireenya fooyya’aa akka jiraatu, qonnaan bulaan oomishaafi oomishitummaa isaa haalaan bal’ifatee bu’aa argatuun gara ‘Investirummaatti’ akka inni ce’u taasisuu ta’ee osoo jiruu; isin keessaa namoonni tokko tokko yaadota tarkaanfilee keenya gufachiisan of keessaa qabdan akka jirtan waan hubanneef ‘Haaromsa Qalbii fi Haaromsa Qabxii’ akka isin barbaachisu irratti waliif gallee jirra. Adaduma ‘Qalbiin’ teessan Haaromaa Haaromaa adeemtuun, ‘Qabxiin’ keessanis Haaaromaa Haaromaa adeemti” jechuun ‘Haagos’ Wal dha’ii waliin dhooftotaa akkuma dur baratame ‘Eebba misoomawaadhaan’ saaqe….!
Akkuma ‘Haagos’ Eebba misoomawaa waliin dhooftotaa afaanii fixateen, ‘Haaromaan Qalbii Madoo’ tokko bakka jiruu harka kaase…..!
‘Haagosis’ waltajjii irraa akka inni yaada isaa dhi’eessuuf mataa raasuun carraa dubbachuu isaaf kennuu isaa mirkaneesseef..!
‘Haaromaan Qalbii Madoo’ carraa dubbachuu ‘Haagos’ irraa argate sunis gaafii……….. “Ulaagaaleen ‘Haaromsaa Qalbiifi Haaromsa Qabxii’ maal fa’aadhaa!?” jechuun gaafate.
“Miseensa dhaaba keenyaa ta’uun cinatti, adeemsi isaa/ishee ‘Tarsiimoofi imaammata’ keenya kan hin gufachiifne yoo ta’e, carraan ‘Qabxii guddaa argachuu bal’aadha” jechuun ‘Haagos’ gaafii ‘Haaromaa Qalbii Madoo’ irraa isaaf dhi’aatte daangaa madaalli ulaagaalee isaanii akeekuun deebiseef.
Battaluma ‘Haagos’ gaafii ‘Haaromaa Qalbii Madoo’ irraa isaaf dhi’aatte akeekeen,………..’Haaromoon Takka Badoo’ hundi isaanii bakka jiranii harka walitti rurrukutan……isaan warra #IlaalchaShiroo qaban waan ta’aniif#IlaalchaBiroo qabdu jedhamanii akeekkachiisni isaan ga’ee waan hin beekneef…..Ulaagaalee ‘Haaromsa Qalbiifi Haaromsa Qabxiitiif’ barbaachisoodha jechuun ‘Haagos’ waltajjii irraa kaase keessatti waan of arganiifiidha…..kanumaf dubbii ‘Haagos’ booda harka isaanii deeggarsaaf wagga 26 oliif kireessuun ‘imammataafi tarsiimoo’ Haagos fa’a jalatti ummata isaanii kiyyeessaniin sana, osoo hin qusatin walitti tuman…!.
Wal dha’iin waliin dhooftotaa isheen haaromsa hin haaromne haaromsuuf akeekkatte falmilee gamaaf gamanaa… ‘Haaromoon Takka Badoofi Haagos wal gargaaruun Haaromoo Qalbii Madoo’ irratti taasisaa jiran keessummeessuun ittuma fufte……Kana hordofuun!
‘Haaromaan Qalbii Madoo’ inni biroos harka kaasuun “Tarsiimoofi imaammata gufachiisuu jechuun maal akka ta’e ifa naa hin taane!?” jechuun gaafate.
‘Haagosis’ kolfa tuffii kolfaa, ija isaa gara ‘Haaromaa Takka Badoo tokkootti’ qabuun, “Ati tarsiimoofi imammata keenyatti amanuuun qaama taasifattee waggoota dheeraaf walitti fuufinsaan lafa qabsiisuun fakkeenyummaa muxannoolee gaggaarii hordofuutiin Qabxii madaallii ol aanaa qabda waan ta’eef ka’ii ibsiif mee” jedheen.
‘Haaromaan Takka Badoo’ ajajni ‘Haagos’ itti kennames bakka jiruu gammachuun fuula ifaan ka’ee akka boonuus ta’aa “kun waggaa 26 guutuu akkamitti osoo isiniif hin galin jiraa!? jechuun haasa misoomaawaa waggoota 26 oliif ‘Goota haasawa misoowaa’ isa taasisuun ‘Haagosiin’ biratti ittiin badhaafamaa ture sana takka takkaan gad yaasuu jalqabe…! “Salphaadhumatti deebiin gaafii keessanii, Akkaataa heeraafi seerri dhaaba keenyaa ajajutti waan gubbaatii gad dhufte ‘Haagos fa’a biraa jechuu isaati..’Godinaa hanga Aanaatti, Aanaatii hanga Gandaatti, Gandaatii hanga Gareetti, Gareetii hanga Goxiitti, Goxiitii hanga tokko shaneetti’ hawaasa biratti gad buusanii lafa qabsiisuudha. Kanuma! Kana gochuudha.” jedhe.
Battaluma kana ‘Haagosiifi Haaromoon Takka Badoo’ hundi isaanii bakka jiranii ammas harka deeggarsaaf kireeffame sana walitti rurrukutan.
Kanumaan ‘Haaromoon Qalbii Madoo’ hundi isaaniis bakka jiranitti gungumuu eegalan…..Sagaleen gungummii ‘Haaromoo Qalbii Madoos’ bakka cufaa galma Wal dha’ii waliin dhooftotaa guutte…,
‘Haagosis’ barruu harka isaatiin teessuma fuuldura jiru rurrukutaa “Adeemsa…..adeemsa” jedhe.
“Hayaataan wal haa dhaggeeffannuu! Haaromsa Qalbii inni nuti jennu kanuma! Yaadotaafi gaafiilee qabdan harka baastanii dhi’eessuun utuu danda’amuu ‘Qalbii hin haaromneen gungumtanii waltajjii kana jeequun keessan ammallee #Ilaalchabirooti. Qalbiin akkanaa ammas Haaromsa gad-fagoo barbaaddi” jechaa ‘Haagos’ sa’aatii harka isaa irra jirtu yoo ilaalu yeroon laaqanaa waan ga’eef “Akkuma walitti dhi’aattaniin wal waliin mari’achaa, Qalbii keessan waggoota dheeraaf osoo nu waliin jirtan isin Haaromuu didde tana yaalii yeroo dhumaaf isin waliin taasifnu tanaan, Haaromfattanii Qabxii teessan fooyyeffachuuf itti yaaduu qabdu” jechuun ‘Haagos galmee irraanfannoo mata dureelee Haaromsa hin haaromne adda addaa irratti ‘irraanfatee jiru moo irratti barreeffate jiru, isa yeroo haaromsa waggoota dheeraa duras itti gargaaramaa ture sana, walitti deddeebisaa “laaqana gaarii” jechuun, oduulee Haaromsa wal dha’ii waliin dhooftotaa tan sa’aatii duraa xumure…………..!
Dubbiin Haaromsa hin haaromne tun, laaqana boodas ——-itti fufti——!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa148SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← KITAABA HAARAA-ISIRAA’EEL HABTAAMUUTIIN-Asoosama Diiddaa Oromoo Dhaamsisaa irraa kan Hindabarre!
THE SECOND OROMO LEADERSHIP CONVENTION: For Immediate Release: 1/20/2017-Houston, Texas, March 10-12, 2017 →